5 Irè Mobile Conversion Optimization Atụmatụ Nke Na-emeri Gị Ndị Ahịa | Martech Zone
A bụ ihe dị mkpa tidbit nke ihe ọmụma: 52 percent nke okporo ụzọ weebụ zuru ụwa ọnụ sitere na smartphones. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eji ekwentị eme ihe na-arị elu. Ọ bụ ebe imirikiti ndị mmadụ na-achọpụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Obi abụọ adịghị ya.
Mana n’enweghi ngwangwa nghota nghota nkiti nke azuma ahia gi, o siri ike izo ndi ozo. Na azụmahịa e-commerce, dịka ọmụmaatụ, achọpụtara na Pasent 55 nke ndị na-azụ ahịa zụtara ihe mgbe ha chọtara ngwaahịa a site na ekwentị ha.
Ahapụkwala! Ndị a bụ ndụmọdụ dị mma njikarịcha ekwentị ise iji mee ka ọnụego gị gbanwee.
1. Mobile Site Loading Speed ​​Bụ Gị Top Ibu ụzọ
Ọsọ dị mkpa ma a bịa na saịtị mkpanaka.
N'ezie, nchọpụta na-egosi na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka na-ebu 5 sekọnd ma ọ bụ ngwa ngwa nwere ike ịmepụta ahịa dị elu karịa ndị dị nwayọ nwayọ. Ndi amaala intaneti anabataghi ngwa ngwa obula. A na-ewere ya dị ka ọbụbụ ọnụ na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka gị.
Dabara nke ọma, i nwere ike ime ọtụtụ ụzọ idozi nsogbu a.
Belata mgbakwunye na ekwentị gị. Ọnụ ọgụgụ nke ihe nkesa na-arịọ na weebụsaịtị gị nwere ike imetụta ọsọ ya. You na-eji ọtụtụ trackers ma ọ bụ ngwaọrụ nyocha? Lelee anya n’ime sọftụwia gị; enwere ike i nwere ike ịchọta nsogbu ahụ ebe ahụ.
Echefula banyere elu gaa na ala nchoputa. Ma eleghị anya, ụfọdụ faịlụ na-ebibi ihe na gị usoro. Faịlụ ndị buru ibu dịka ọdịnaya anya nwere ike belata ọsọ ọsọ gị. Yabụ, ị nwere ike ịchọrọ ibelata faịlụ gị na weebụsaịtị gị. Ihe onyonyo, ad-tech, na font number bu ndi ozo na-eme ihe ojoo na nke a.
Mụta ihe content na mkpa ka butere ụzọ. Debe ha n'elu peeji gi, nke kwesiri ibu uzo tupu ihe ozo di na weebụsaịtị. Usoro a nwere ike ịbawanye oke ibu gị mgbe ị na-echebara ahụmịhe onye ọrụ UX nke saịtị ahụ.
2. Họrọ Responsive Design iji bụrụ Mobile Njikere
Na-anabata ngwa ngwa ekwenti siri ike ịmepụta. Kwesịrị ịhazigharị nha nha ihuenyo dị iche iche. Mana ọchịchọ ahụ akwụsịghị n’ebe ahụ. Alsokwesịrị ịtụle usoro ekwentị na ikpo okwu dị iche.
Nwere ike ilekwasị anya na bọtịnụ maka igodo dị mfe. Menus ma ọ bụ edemede kwesịrị ịdị mfe pịa. Peeji ọ bụla kwesịrị inye onye ọrụ ahụ nkọwa doro anya ebe ọ ga-aga mgbe ha chọrọ imezu ihe dịka ịgbakwunye ihe ahụ na ụgbọ ala, ịkagbu arịrịọ, ma ọ bụ ịlele iwu.
Nhazi nke imewe kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe. Okwesiri ịnwe ikike ikike ederede, mkpebi, na nha vidiyo. Naanị cheta, ekwesịrị idozi azịza ekwentị. Akwụkwọ na-adịghị agwụ agwụ, nnukwu ederede, na ihe ndị a na-ahụ anya sara mbara bụ njedebe maka ndị ọbịa gị.
3. Wepụ adịghị mma Pop-acha ọkụ na vidiyo maka ndị ọrụ ekwentị
Ndị pesky pop-acha ọkụ na vidiyo na mgbasa ozi nwere ike ibibi gị n'ozuzu web imewe, na n'aka, gị akakabarede ọnụego nakwa.
N'agbanyeghị otu esi arụ ọrụ weebụ gị nke ọma, imejuputa ọtụtụ mmapụta ga-ebelata UX na afọ ojuju ndị ahịa, nke na-eduga na ngbanwe ntụgharị dị ala.
Kama ịmịkwuo ndu, ikekwe ị ga-enweta ọnụego mgbago elu na ibelata okporo ụzọ. N'ezie, dị ka otu nnyocha nke ndị Njikọ maka Mma Mgbasa ozi, ụfọdụ ụdị mgbasa ozi ịkpọ asị kachasị asị:
Na-egwu egwuregwu na-akpaghị aka
Animations na-na-egbu maramara
Mgbasa ozi nwere ọnụọgụ tupu ịhapụ
Ibe weebụ ndị nwere mkpanaka nwere ihe karịrị 30% nke mgbasa ozi
4. Mee Ka Ọ Dịkwuo Mfe Site Enweghị Enweghị Ọpụpụ
Abandonhapụ ndenye ọpụpụ abụghị ihe ọhụrụ. Ihe kpatara ya bụ na atụmatụ adịghị mma nke ndenye ọpụpụ peeji nke. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ndị ahịa ji hapụ ngwaahịa na ụgbọ ibu azụmahịa na-enweghị ịzụta ha. Ọtụtụ mgbe, ha enweghị ike ịchọta bọtịnụ ziri ezi ịpị, ma ọ bụ peeji ahụ dị mgbagwoju anya ịnyagharịa.
Yabụ, edebe ndenye ọpụpụ kwesịrị ịdị ọcha na ntakịrị. Oghere ọcha na ịgbasa usoro na ọtụtụ peeji ga-enyere aka. Mkpọchi ahụ kwesịrị ime ka onye ahịa nweta iwu ziri ezi nke usoro ndenye ọpụpụ.
5. Tinye msdị ofkwụ Othergwọ Ndị Ọzọ
Ebe ndenye ọpụpụ bụ ebe ị nwere ike ịgbanwe ndị ọbịa ka ha bụrụ ndị ahịa n'ezie. Ya mere, ekwesịrị ịkwado ya maka azụmahịa dị nro na ntụgharị dị elu.
Atụla anya na ndị ahịa gị niile ga-eji PayPal akwụ ụgwọ maka iwu ha.
E-azụmahịa azụmahịa kwesịrị ịtụle mgbanwe mgbe niile. Ndị ọzọ karịa kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ụlọ akụ, ị nwere ike ịchọrọ ịgbakwunye Apple Pay, na Google na-akwụ ụgwọ na channelụ ịkwụ ụgwọ na weebụsaịtị gị. Obere akpa dijitalụ na-apụta nwayọ nwayọ, nke azụmaahịa e-commerce kwesịrị ịlele ma jiri ya.
Ka ekwentị na-achị ụwa, azụmaahịa kwesịrị ịmụ ịmegharị.
Enwere ọtụtụ ohere na ụlọ ahịa na igwe eji arụ ọrụ. All ọ na-ewe bụ ezigbo imewe na mgbe nile njikarịcha. Mee ka ndị ahịa gị nwee ọ happyụ site na ntanetị web ekwentị gị site na ịme ihe niile a haziri nke ọma.
Ma e nwekwara ụzọ ka mma isi eme ihe. Nwere ike ịnweta enyemaka site na ndị ọkachamara. Ihe njikarịcha ekwentị nwere ike isi ike, mana site na enyemaka nke imewe weebụ web Derry ị nwere ike ime ya niile na finesse. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịchekwa oge iji lekwasị anya n'akụkụ ndị ọzọ nke azụmaahịa gị.
Tags: akpaaka-egwu videommekorita maka mgbasa ozi ka mmangụda mgbasa ozintụgharị ntụgharịnjikarịcha ekwentịekwentị mkpanaaka popupmobile ọsọmobile website ọsọenweghị nkebi ndenye ọpụpụ